လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု - သွေးဆောင် copulatory တားစီးကနေပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး hypersensitivity တစ်ချိန်တည်းသင်တန်းကိုလိုက်နာ: တူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၏နှစ်ခုဖော်ပြချက်? (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်-သွေးဆောင် copulatory တားစီးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး hypersensitivity ကနေပြန်လည်နာလန်ထူနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းသင်တန်းကိုလိုက်နာ: တစ်တူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၏နှစ်ခုအသုံးအနှုန်းတွေ? (2010)
မှတ်ချက်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်ကြွက်များဖြစ်သည်။ နောက်ပြန်လှည့်ရန်အနည်းဆုံး ၄ ရက်ကြာမြင့်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများဖြင့်မှတ်သားထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ လိင်မှုကိစ္စပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း (ကူးစက်မှုနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုအရေအတွက်) သည် ၁၅ ရက်ကြာသည်။ ဤသုတေသနပညာရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုသကဲ့သို့လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ဆုလာဘ်များအားအလွန်အကျွံနှိုးဆွခြင်းကိုတားဆီးရန်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
လေ့လာမှုမှ: ဒါဟာသုတ်ရည်ထိထံမှ satiation မှရရှိလာတဲ့ရှည်တည်တံ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးက၎င်း၏အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ဆားကစ်၏ဆွကျော်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အကာအကွယ်ယန္တရားဖွဲ့စည်းကြောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ mesolimbic စနစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ  အပါအဝင်သဘာဝကဆုလာဘ်များအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးဖွငျ့ဤတိုက်နယ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွစဉ် mesolimbic စနစ်အားလှုံ့ဆော်ပေသည်ထားတဲ့တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းအကြိမ်ကြိမ်သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်လိင်မောကြွက်များအားဖြင့်ပြသမူးယစ်ဆေး hypersensitivity နဲ့တူအောင်အမူအကျင့်ာင်း  ထုတ်လုပ်နေ
ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2011 မတ်လ 1; 217 (2): 253-60 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2010.09.014 ။ EPub 2010 စက်တင်ဘာ 25 ။
Rodriguez-Manzo, G1, Guadarrama-Bazante IL, Morales-Calderon, တစ်ဦးက.
Departamento က de Farmacobiología, Cinvestav, IPN-Sede Sur, Calzada က de los Tenorios 235, Delegación Tlalpan, မက္ကဆီကို 14330 DF, မက္ကဆီကို။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်သို့ရောက်ရှိသည်အထိအကြိမ်ကြိမ်တစ်ခုတည်း oestrous အမျိုးသမီးသုက်နှင့်အတူကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ copulating ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ Non-မောယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာနှစ်ဆယ်လေးနာရီဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်နောက်, လိင်မောအထီးဇီဝကမ္မကိုပြောင်းလဲတဲ့စီးရီးပြ။ ၎င်းတို့အနက်အများဆုံးထင်ရှားတဲ့ကြာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ရပ်တွေကိုတစ်ခု generalized hypersensitivity ဖြစ်ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်အလုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာယင်း၏စကားရပ်များ၏ကြာချိန်စပ်လျဉ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ဤနှစ်ခု features တွေအကြားဆက်စပ်မှုရှိခဲ့လျှင်တည်ထောင်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြောင်းရည်ရွယ်ချက်မှကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ကနေအလိုအလျောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်မူးယစ်ဆေး hypersensitivity ဖြစ်ရပ်ဆန်း၏ကြာချိန်သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ ပြားခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဟန်အနေအထား: အဆုံးစွန်သောအဆိုပါ serotonergic syndrome ရောဂါ၏လက္ခဏာသက်သေများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်မှတဆင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များမူးယစ်ဆေး hypersensitivity ဖြစ်ရပ်ဆန်းများနှင့် satiation မှသုတ်ရည်ထိထံမှရလဒ်များသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ဖြစ်စဉ်ကိုအပြီးသူတို့ရဲ့စကားရပ် 96 ဇအတွက်အကြီးအကျယ်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူပြန်လည်နာလန်ထူတစ်အလားတူအချိန်သင်တန်းကိုလိုက်နာကြောင်းပြသသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ Reversible လုပ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်များ၏ရှည်လျားသောတည်မြဲဇာတ်ကောင်ကအကြံပြုအတိုင်းဤတွေ့ရှိချက်ဤဖြစ်ရပ်တစ်ဦးတူညီဦးနှောက် plasticity လုပ်ငန်းစဉ်၏နှစ်ခုအသုံးအနှုန်းတွေကိုကိုယ်စားပြုအံ့သောငှါဖော်ပြသည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2010 Elsevier BV All rights reserved ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ကြော်ငြာ libitum သုတ်ရည်ထိသင်တန်းတွင်ထပ်ခါတလဲလဲသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်ပေါ်လာသောရှည်တည်တံ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ inhibitory ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် [2,12] ။ နှစ်ဆယ်လေးပါးနာရီပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပြီး, အထီးကြွက်တစ်လက်ခံအမျိုးသမီး၏ရှေ့မှောက်တွင်နှစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်အတွက်ပြုမူ: သူတို့ထဲကသုံးပုံနှစ်ပုံမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမပြကြဘူးနှင့်ကျန်ရှိသောတတိယတစ်ကြိမ် ejaculating နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါသည်, သောနောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကိစ္စတွေပြန်မပါဘဲ သုတ်ရည်လွှတ်  ။ ထို့ကြောင့်လိင်မောကြွက်နှစ်ခုလူဦးရေ satiation မှသုတ်ရည်ထိပြီးနောက်ပုံမှန် 24 ဇတစ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် non-တုံ့ပြန်မှုတဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်။ Non-မောယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဒီတူညီတဲ့စမ်းသပ်ခြင်းအမှတ် (24 ဇ) မှာလိင်မောအထီးကြွက်ဇီဝကမ္မကိုပြောင်းလဲတဲ့စီးရီးပြ။
ဥပမာအားဖြင့်များအတွက် medial preoptic ဧရိယာ  တူသော copulatory အပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဒေသ, လျှပ်စစ်ဆွခြင်း, ventral tegmental ဧရိယာ  နှင့်နျူကလိယ  လိင်ကြုံတွေ့အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစကားရပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, ဒါပေမယ့်ကင်းမဲ့ accumbens လိင်ကုန်သည့်အခါအတူတူဘာသာရပ်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်၏။
နောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုလိင်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်  မှာဖော်ပြထားတဲ့သုတ်ရည်လွှတ်၏ anxiolytic ကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ သုတ်ရည်လွှတ်၏ဤပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတဦးတည်းအပြီးပေါ်လာတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတည်တတ်၏တစ်ချိန်ကနှစ်ခုသို့မဟုတ်ခြောက်လအဆက်ဆက်သုက်သို့သော် satiation ဖြစ်စဉ်ကိုအပြီး 24 ဇ, လိင်မောတိရိစ္ဆာန်များ၏တုံ့ပြန်မှုလူဦးရေအားဖြင့်ပြသသည့်သုတ်ရည်လွှတ်တစ်ခု anxiolytic တူသောအကျိုးသက်ရောက် [22 ၏ကင်းမဲ့ ] ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိင်မောကြွက်မှ pharmacological ကုသမှုစီမံခန့်ခွဲသည့်အခါတစ်ဦးတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေး hypersensitivity တို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်လိင်ဝကြွက်ဟာ serotonergic 5-HT1A အဲဒီ receptor agonist အတွက် 8-hydroxy-di-propil အမိုင်နို tetraline (8-Oh-DPAT), မောယောက်ျား၏ဝိသေသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီးနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့အပြင်, လက္ခဏာတွေ၏အသွင်အပြင် induces အဆိုပါ serotonergic syndrome ရောဂါ (5-HT syndrome ရောဂါ)  တစ်ဦးထိုးပြီးနောက်  Non-မောတိရိစ္ဆာန်များအတွက် inducing မဟုတ်ပါဘူး။ Yohimbine  လိင်ကြုံတွေ့ကြွက်များ၏ copulatory အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦး biphasic, ထိုး-based အကျိုးသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုမှလူသိများတစ်ခု _6-adrenergic ရန်  မဟုတ်တဲ့မောသူတို့ကိုထက်လိင်မောကြွက်အတွက်၎င်း၏သင်တန်းနည်းပြသက်ရောက်မှုများအတွက်ကျဉ်းပြတင်းပေါက်ရှိပြီး, အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှု opioids နှင့်အတူမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်  naloxone နှင့် naltrexone antagonists ။ နောက်ဆုံးတွင် dopaminergic ရန်, haloperidol  လိင်ကြုံတွေ့ကြွက်များတွင်ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်ကင်းမဲ့ကြောင်းဆေးများမှာလိင်မောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စက်ဝိုင်းအပြုအမူ elicits ။ အတူတူအဲဒီဒေတာကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသော neurotransmitter စနစ်များမှာသရုပ်ဆောင်ကွဲပြားခြားနား pharmacological အေးဂျင့်များ၏စနစ်တကျဆေးထိုးပြီးနောက်ပေါ်လာသောကတည်းကမူးယစ်ဆေးလုပ်ရပ်များဖို့ hypersensitivity, လိင်ဝကြွက်တစ် generalized ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြောင်းအကြံပြု
အဆိုပါလိင်မောတုံ့ပြန်မှုလူဦးရေနီးပါးအဘယ်သူမျှမသုတ်ရည်ထိပြန်လည်စတင်ဘယ်မှာထို့ကြောင့် 24 ဇ postsatiation မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်, လိင်မောကြွက်များ၏ ejaculatory စွမ်းရည်အတွက်တိုးတက်သောတိုးလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထို့ကွောငျ့အ satiated ကြွက်၏ 40% ကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်3အဆက်ဆက်သုက် 72 ဇမှတက်လျက်ရှိသည်။ ဤသည်မှာရာခိုင်နှုန်းသည် satiation လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းလိင်ကြုံတွေ့ကြွက်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအောက်ပိုင်းကစာရင်းအင်းသိသိသာသာ 24 ဇမှာရရှိသောတစ်ဦးထက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်သိသိသာသာဖြစ်ခဲ့သည်။4အဆက်ဆက်သုက်အများဆုံး satiation ပြီးနောက် satiated ကြွက် 96 ဇနေဖြင့်အောင်မြင်, ဤအရေအတွက်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွင်းသောအရာများ၏5ရက်ကြာကာလပြီးနောက်7မှထခဲ့ပါတယ်။
သုတ်ရည်လွှတ်ရရှိ satiated ကြွက်များ၏ရာခိုင်နှုန်း, သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်သုတ်ရည်ထိပြန်လည်စတင်ဤတိရစ္ဆာန်များ၏အချိုးအစားနှင့် ejaculatory: satiation မှသုတ်ရည်ထိပြီးနောက်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူပြန်လည်နာလန်ထူ၏ယာယီသင်တန်းပေါ်တွင်အချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုလုပ်ငန်းစဉ်အဓိကအားဖြင့်သုံး variable တွေကိုတဆင့်လိုက်နာရကြောင်းကိုပြသ စွမ်းရည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွင်းသောအရာ၏ကွဲပြားခြားနားသောကာလပြီးနောက် satiated ကြွက်များအားဖြင့်ပြ။ ရလဒ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် session တစ်ခုပေးဖို့သုတ်ရည်ထိအောက်ပါပထမဦးဆုံး 48 ဇစဉ်အတွင်း, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှင်းလင်းစွာလိင်ကဒီတိုးလာ ejaculatory ပြယောက်ျား၏ rats.The အချိုးအစား၏အလွန်သေးငယ်တဲ့အချိုးအစားအတွက် ejaculatory စွမ်းရည် (3 အဆက်ဆက်သုက်) တွင်တစ်ဦးတိုးနှင့်အတူ, inhibited ဖြစ်ကြောင်းပြသ စွမ်းရည် satiation ပြီးနောက် 72 ဇကြီးထွားများပြားစေ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွင်းသောအရာတစ် 96 ဇကာလပြီးနောက်အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်သုတ်ရည်ထိ ejaculate နှင့်ပြန်လည်စတင်နိုင်ကြသည်။ တစ်ဦးစမ်းသပ်ကိုင်တွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နောက်ကြောင်းပြန်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အသုံးပြုသတ်မှတ်ထားသုတ်ရည်လွှတ်  ပြီးနောက်သုတ်ရည်ထိပြန်လည် satiated ကြွက်များ၏စွမ်းရည်များပြန်လည်နာလန်ထူဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒါဟာတစ်ဦးအရည်အသွေးအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ satiation အားလုံးနှစ်ခုအဆက်ဆက် copulatory စီးရီးရရှိနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်သမျှသောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်ရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သောဤအချက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးကပြောသည်နိုင်ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွင်းသောအရာတစ်7ရက်ကြာကာလပြီးနောက်အားလုံးနီးပါးတိရိစ္ဆာန်များ၏ ejaculatory စွမ်းရည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်ဝပ်စွာနေရသော4ရက်အကြာမှာ5ရက်အကြာမှာနှင့် 10 မှ6ရန်, 15 အဆက်ဆက်သုက်မှတိုးပွားစေပါသည်။
satiation လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (ခုနစ်ခု) အားသုတ်ရည်ထိစဉ်အတွင်းလိင်ကြုံတွေ့အထီးများကပြအဆက်ဆက်သုက်၏အဓိပ္ပါယ်ကိုအရေအတွက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွင်းသောအရာ၏ 15 ရက်ပေါင်းပြီးနောက်ဝကြွက်၏ထက်ဝက်အားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာပြီးခဲ့သည့်အချိုးအစား Non-မောယောက်ျားအတွက် satiation session တစ်ခုပေးဖို့သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းရရှိသောတဦးတည်းအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ဘူး။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအပေါ်သဲသောင်ပြင်များနှင့်ယော်ဒန်မြစ်၏မူလလေ့လာမှု  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကနေအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက် 15 ရက်ပေါင်းတဲ့ကာလအစီရင်ခံတင်ပြ အရာ satiation အောက်ပါအနည်းငယ်တိကျသောအချိန်ကြားကာလမှာလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိဒေတာ, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အသီးအသီးအချိန်မှတ်ဘို့ကြွက်၏ကြီးမားသော (အသေးစိတ်ကိုယ်စားလှယ်) လွတ်လပ်သောအုပ်စုများကို အသုံးပြု. ရယူ, နှင့် (နောက်ဆုံးအသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက် ejaculating မပါဘဲ 90 မိ) ကို satiation စံနှုန်းလျှောက်ထားဤအချက်များအသီးအသီးမှာ ejaculatory စွမ်းရည်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာလေ့လာမှုများနှင့် inhibitory ကာလကြာချိန်ကိုတည်ထောင်ဘို့အလုပ်ဟာခြားနားနည်းလမ်းများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ် Paradigm ၏ကြားမှ, အချိန်၏တူညီသောအာကာသအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုအတူတကွ7အဆက်ဆက် ejaculatory စီးရီးနှင့် Post-ejaculatory ကြားကာလများ၏ကြာချိန်အတွက်အဆတိုးတစ်ခုယုတ်အရေအတွက်ကတသမတ်တည်းကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ် Paradigm တုံ့ပြန်လေ့လာတွေ့ရှိပြီဆိုတဲ့အချက်ကို [3,12,18] နှင့်အတူထိုသူအပေါင်းတို့သော့ချက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု လွတ်လပ်စွာဒီ inhibitory ပြည်နယ်သွေးဆောင်ရန်အသုံးပြုသည့်ပါရာဒိုင်း၏, ပေါ်ထွက်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်စဉ်၏အင်္ဂါရပ်များ။
ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံမူရင်း ejaculatory စွမ်းရည်များ၏တိုးတက်သောပြန်လည်နာလန်ထူ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ၏ဒီဂရီကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဝတ္ထုလိင်မောကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစကားရပ်လွယ်ကူချောမွေ့စမ်းသပ်ထိန်းသိမ်းရေးများ၏သက်ရောက်မှု၏ကြာချိန်၏တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်ကိုဒေတာ, အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးသဖြင့်မွတ်မပြေနိုင်သောပါရာဒိုင်းအကြောင်းမဲ့ကြွက်များတွင်ထုတ်လုပ် inhibitory ပြည်နယ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်။
မူးယစ်ဆေး hypersensitivity ဖြစ်ရပ်ဆန်းစပ်လျဉ်းခုနှစ်, 5-HT-syndrome ရောဂါ၏ကွဲပြားခြားနားသောဆိုင်းဘုတ်များ၏သုံးသပ်ချက် FBP ကြွက်များတွင် 8-Oh-DPAT ၏အနိမ့်ဆေးများ၏ ip ဆေးထိုးပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိအရှိဆုံးတသမတ်တည်းလက္ခဏာသက်သေဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား။ ဤသည်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးကွဲပြားခြားနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်အတူအထီးကြွက်များ၏ differential ကို sensitivity ကို evidencing နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအတူတကွ forepaw ကျြောနငျးရာနှင့်အတူ FBP ယခင်ကပိုမိုမြင့်မားထိုးအဆင့်သော်လည်း non-လိင်မောကြွက်များတွင် 8-Oh-DPAT ၏ ip ဆေးထိုးဖို့ဆက်နွယ်ခဲ့နှစ်ခုလက္ခဏာတွေ  ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်ချက်အတွက်နိမိတ်လက္ခဏာကိုနင်းနယ်ပု forepaw လွတ်လပ်စွာမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ, တိရစ္ဆာန်သာရံဖန်ရံခါထင်ရှား။ , အဆိုပါ differential ရလဒ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုသည့် 5-HT1A agonist ၏အနိမ့်ထိုးအဆင့်ဆင့်အပေါ်မှီခိုဖို့များပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ဤအနိမ့်ထိုးအဆင့်ဆင့်မှာအစောပိုင်းသတင်းပေးပို့မ 5-HT syndrome ရောဂါ၏ hindlimb ပြန်ပေးဆွဲနိမိတ် 8-Oh-DPAT ၏ ip ဆေးထိုးရာမှဖြစ်ပေါ်ခြင်း, တစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအားလုံးနီးပါးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နှင့်အကြောင်းရင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, အတူတူ, သူကသာသည်အခြားအကျင့်ကိုကျင့်အတွက်စမ်းသပ်ပြီးဘဲ, အလွန်နိမ့်ဆေးများမှာပေါ်လာ ie ။ လိင်ကြုံတွေ့နှင့်လိင်ဝတိရိစ္ဆာန်များအကြားမျှော်လင့်ထားသည့်မူးယစ်ဆေး sensitivity ကိုခြားနားချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း FBP လက္ခဏာသက်သေများကသက်သေခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာလိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်လိင်ကြုံတွေ့ကြွက်အကြားတစ်ဦး differential ကို sensitivity ကို၏တည်ရှိမှုကိုလည်းထူထောင်နိုင်ပါတယ်။
လိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်လိင်မောတိရိစ္ဆာန်များအကြားမူးယစ်ဆေးဝါး sensitivity ကိုအတွက်ကွာခြားချက်ပြင်းအား၏တဦးတည်းအမိန့်ရောက်ရှိ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကမူးယစ်ဆေးလုပ်ရပ်များမှကြွက်များ၏ sensitivity ကိုပွောငျးလဲသောပထမဦးဆုံးအလုပ်အစီရင်ခံသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာအရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် functioning ဦးနှောက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုကြှနျတျောတို့၏အာရုံကိုခေါ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်အကျင့်ကိုကျင့်၏တစ်ဦးတိုးပွားလာဤပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပါပြီ။ ; ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကသြဇာလွှမ်းမိုးမှု Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း Secret [8,29] တိုး medial preoptic ဧရိယာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase  စိတ်ဓါတ်များကိုအထူးပြုနဲ့  anxiety- လျှော့ချခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူ  အားဖြင့်ထိခိုက်စေသည်ဟုအစီရင်ခံအကျင့်ကိုကျင့်ရှာတှေ့နိုငျ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ neurogenesis  အသားစားအနံ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်တိုးပွါးခြင်းနှင့်မျိုးဗီဇဟာ dorsal အတွက်စကားရပ်နှင့် ventral striatum ပြောင်းလဲမှုများ  အားပေးအားမြှောက်။ ပစ္စုပ္ပန်အလုပ်၏ရလဒ်များကိုအဆိုအရမူးယစ်ဆေး sensitivity ကိုတစ်ခုတိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများစာရင်းထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ hypersensitivity အခြေခံတလိင်မောကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိထက်လိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ကြုံတွေ့ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိမူးယစ်ဆေး hypersensitivity တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်ဖြစ်ရပါမည်ကြောင်းထောက်ပြရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောရှင်းလင်းစွာ satiation အတွေ့အကြုံကိုဖို့သုတ်ရည်ထိဆက်စပ်သောခံရဖို့ပုံပေါ်နေချိန်တွင်ယခင်မကြာသေးခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (ဤကြွက်ကြိုတင် 5-Oh-DPAT ဆေးထိုးဖို့အနည်းဆုံး 8 ရက်ပေါင်းသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံခဲ့) နှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်သည်ကို ထောက်. ဤသည်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် (vide Infra) ။ လိင်ကြုံတွေ့နှင့်လိင်မောတိရစ္ဆာန်များ၏ 8-Oh-DPAT ဖို့ differential ကို sensitivity ကိုလည်းဒီ compoundoncopulatory အပြုအမူ၏စည်းရုံးရေးမှူးများလုပ်ရပ်များအတွက်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ 8-Oh-DPAT နီးပါးလိင်ကြုံတွေ့ကြွက်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိကြစဉ်ထို့ကြောင့်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ဆေးများမှာသိသိသာသာသူတို့ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် satiated ကြွက်အပေါငျးတို့သလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ parameters တွေကို facilitated နှင့်သိသိသာသာသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်သုတ်ရည်ထိပြန်လည်စတင်ကြောင်းမောတိရိစ္ဆာန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းတိုးပွားလာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation reverse မှ 8-Oh-DPAT များ၏စွမ်းရည်ကိုပြီးသားထူထောင်ခဲ့သော်လည်း  ပစ္စုပ္ပန်အလုပ်၌ဤအကျိုးသက်ရောက်မူးယစ်ဆေးလုပ်ရပ်များမှလိင်ဝကြွက်များ၏ hypersensitivity အတည်ပြု, မူလကအသုံးပြုခဲ့တွေထက်အများကြီးနိမ့်ဆေးများမှာရှာတွေ့ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကလိင်ဝကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ inhibitory ခွအေနအေသုတ်ရည်ထိပေါ် 8-Oh-DPAT ၏စည်းရုံးရေးမှူးများသက်ရောက်မှုချဲ့နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍကစားကြအံ့သောငှါစိတ်ကိုထားရပါမည်။ စမ်းသပ်ဆဲထိန်းသိမ်းရေး၏လိင် facilitatory သက်ရောက်မှုအကောင်းဆုံးဆင်းရဲသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်ရသည်။ copulatory အပြုအမူအကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာမဆိုအမှု၌, ဒါကြောင့်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး hypersensitivity ဖြစ်ရပ်ဆန်းများနှင့်တစ်ဦးကွဲပြား Basal လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအခြေအနေကြောင့်တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားခွဲခြားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
FBP ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် 8-OHDPAT ဖို့ hypersensitivity များ၏ကြာချိန်၏စာမေးပွဲသည်ဤဖြစ်စဉ်အတွက် satiation လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပါ 72 ဇကြာနှင့်လုံးဝနီးပါး satiation မှသုတ်ရည်ထိပြီးနောက် 96 ဇပျောက်ပြသထားတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, လိင်မောယောက်ျား၏ copulatory အပြုအမူအပေါ် 8-Oh-DPAT ၏စည်းရုံးရေးမှူးများလုပ်ဆောင်ချက်များကို satiation လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်နေဆဲအားလုံးတိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ parameters တွေကို 96 ဇအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ တနည်းကား, လိင်ဝကြွက်များတွင် 8-Oh-DPAT ၏ဤအနိမ့်ထိုး၏စည်းရုံးရေးမှူးများလုပ်ရပ်များရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ inhibitory ခွအေနအေ၏အလှူငွေစွန့်ပစ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, 5-HT syndrome ရောဂါ၏ FBP နိမိတ်လက္ခဏာကိုမူးယစ်ဆေး hypersensitivity ဖြစ်ရပ်ဆန်းကနေပြန်လည်နာလန်ထူ၏ဝိသေသလက္ခဏာများတည်ထောင်ရန်ပိုကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်အဖြစ်ထို့ကြောင့်အဆိုပါ satiation လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်တိုင်ကများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုနှင့်အတူရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ပုံပေါ်လို့မရပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် FBP စကားရပ်မှတဆင့်အကဲဖြတ် 8-Oh-DPAT, ရန် hypersensitivity ၏ထံမှထွက်ပေါ်လာသောအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီး၏အလိုအလျောက်ပြန်လည်နာလန်ထူလုပ်ငန်းစဉ်၏ analysis, နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်တစ်ဦးတစ်ချိန်တည်းသင်တန်းကိုလိုက်နာကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်ဝပ်စွာနေရသော 96 ဇပြီးနောက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးအားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပြောင်းပြန်နှင့် FBP ဖေါ်ပြခြင်း satiated ကြွက်များ၏အချိုးအစား% 25 မှကျရောက်နေသည်, သူတို့ကိုနီးပါး 100% မှမတူဘဲပထမဦးဆုံး5ဇစဉ်အတွင်းဒီ 72-HT syndrome ရောဂါနိမိတ်လက္ခဏာကိုပြ satiation အောက်ပါ။ ပြန်လည်နာလန်ထူ၏ဤအလားတူအချိန်သင်တန်းနှစ်ခုဖြစ်ရပ်တစ်ဦးတူညီဦးနှောက် plasticity လုပ်ငန်းစဉ်၏ကွဲပြားခြားနားသောသရုပ်ကိုကိုယ်စားပြုအံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။ လိင်မောကြွက်များ၏ hypersensitivity နောက်ထပ်4ရက်နောက်ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအပြီးပျောက်သွားဆိုတဲ့အချက်ကိုနောက်ခံယန္တရား5ရက်ပေါင်းသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ပြီးနောက်နေဆဲပစ္စုပ္ပန်သောလိင်ကြုံတွေ့ကြွက်များတွင် hypersensitivity ထုတ်လုပ်တကနေမတူညီတဲ့သူဖြစ်ရမည်သောစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။ အိုး et al ။ မကြာသေးမီကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များ  နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာလိင်အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များစိတ်ကြွဆေးတစ်ခုတိုးလာ locomotor တုံ့ပြန်မှုပြပေးသည့်အတွက်အထီးကြွက်များတွင်တစ်ဦးအမူအကျင့်ာင်းဖြစ်ရပ်ဆန်း induces ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အမူအကျင့်ာင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးတစ်ခုတိုးလာတုန့်ပြန် / hypersensitivity ဆိုလိုဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိဒေတာနှင့်အတူဤတွေ့ရှိချက်များ၏တူညီ, ထငျရှားပါသညျ။ လိင်ကြုံတွေ့တိရစ္ဆာန်များ၏လက်ရှိဒေတာနှင့်အတူလိုင်းမှာအစီရင်ခံာင်းဖြစ်ရပ်ဆန်းထပ်ခါတလဲလဲပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမိတ်လိုက်ပြီးနောက်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်, ပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက်လိင်ကြုံတွေ့ကြွက်ဆပ်ဖို့ပစ္စုပ္ပန်အလုပ်များတွင်အသုံးပြုတယောက်နှင့်တယောက်အပတ်တွင်မှအလားတူတဲ့နည်းလမ်းကို; ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အတွက် 5-HT syndrome ရောဂါစမ်းသပ်မတိုင်မီခွင့်5နေ့ကကာလမှနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအောင်းနေချိန်။
စိတ်ဝင်စားစရာအိုးများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလည်းစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် locomotor ာင်းဖြစ်ရပ်ဆန်းအပေါ်7ရက်ဆက်တိုက်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲသုတ်ရည်လွှတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမိတ်လိုက်  ပြီးနောက်ရရှိသောတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များမှနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါ 8-Oh-DPAT ဖို့ပိုပြီးသိသာနှင့်တိုတောင်းတည်တံ့ hypersensitivity နှင့်အတူဒီ data ဆနျ့ကငျြဘဒီနေရာမှာလိင်မောကြွက်များအတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကွာဟမှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပါရာဒိုင်းထပ်ခါတလဲလဲသုတ်ရည်လွှတ် (ပျှမ်းမျှအတွက် 7) (2.5 ဇပတ်ပတ်လည်) တစ်ဦးအတော်လေးတိုတောင်းသောအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ထို့ကြောင့်7အပေါ်တစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်တထက်ကွဲပြားဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအချက်ကိုအပေါ်အားကိုးစေခြင်းငှါ, ရက်ဆက်တိုက်။ အဲဒီနှစျခု Paradigm ၏ရလဒ်ကိုအတွက်အဓိကခြားနားချက်လိင်မောကြွက်များတွင်သာ3ရက်ပေါင်းကြာမြင့်ခြင်းနှင့်အိုးထဲမှာ 28 ရက်ဆက်တိုက်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲမိတ်လိုက်အကြောင်းမဲ့အဆိုပါကြွက်များအတွင်း7နေ့ရက်ကာလအဘို့အနည်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သော hypersensitivity ဖြစ်ရပ်ဆန်း၏ကြာချိန်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာဖြစ်ပါတယ် အလုပ်။
အတူတူဒီမှာတင်ဆက်ဒေတာယေဘုယျအားဖြင့် copulatory လှုပ်ရှားမှုမူးယစ်ဆေးလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်တံခါးခုံကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုပုံအထီးကြွက်၏ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာထိခိုက်စေသောပြသပါ။ satiation မှသုတ်ရည်ထိ, အထူးသဖြင့်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး hypersensitivity ဖြစ်ရပ်ဆန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ပြီးနောက်အကြီးအကျယ် ပတျသကျ. အလှနျသေးနု 96 ဇဖေါ်ပြခြင်း, ပြန်လည်နာလန်ထူတစ်အလားတူအချိန်သင်တန်းကိုလိုက်နာမှပေါ်လာမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ inhibitory ပြည်နယ်နှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်ပေါ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်များ၏ရှည်လျားသောတည်မြဲဇာတ်ကောင်သာစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခု Reversible လုပ်သဘောသဘာဝ evidencing အချိန်အတွက်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားသောဦးနှောက်ကိုပလပ်စတစ်စသောအပြောင်းအလဲ၏ဖြစ်ပျက်မှုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသုတ်ရည်ထိထံမှ satiation မှရရှိလာတဲ့ရှည်တည်တံ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးက၎င်း၏အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ဆားကစ်၏ဆွကျော်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အကာအကွယ်ယန္တရားဖွဲ့စည်းကြောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ mesolimbic စနစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ  အပါအဝင်သဘာဝကဆုလာဘ်များအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးဖွငျ့ဤတိုက်နယ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွစဉ် mesolimbic စနစ်အားလှုံ့ဆော်ပေသည်ထားတဲ့တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းအကြိမ်ကြိမ်သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်လိင်မောကြွက်များအားဖြင့်ပြသမူးယစ်ဆေး hypersensitivity နဲ့တူအောင်အမူအကျင့်ာင်း  ထုတ်လုပ်နေ  ။
ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံမူးယစ်ဆေး hypersensitivity နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး၏တော့သည်ယာယီသင်တန်းများအတွက် mesolimbic system ကိုမှာသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတစ်ခုသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်များပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှသုတ်ရည်ထိသင်တန်းတွင်အစွန်းရောက်ဆွကနေ mesolimbic system ကိုကာကွယ်ပေးရန်ရည်ရွယ်တစ်ဘုံ, ယာယီ, ဦးနှောက် plasticity ဖြစ်ရပ်ဆန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုနျးမြားဖွစျနိုငျ.
နောက်ပြန်လှည်ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်တာရှည်တည်မြဲအပြောင်းအလဲများကို၏ induction: အနာဂတ်စမ်းသပ်ချက်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားဖို့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်နိုင်ချေယန္တရားများလေ့လာဖို့ညွှန်ကြားကောက်ယူရပါမည်။